Indlela yokukhangela imifanekiso ngaphandle kwemvelaphi kuGoogle: isifundo esisisiseko kunye nezicelo | Abadali be-Intanethi
UyiKhangela njani imifanekiso engasemva kuGoogle
KuGoogle awukwazi ukukhangela kuphela imifanekiso yeyona nto uyithanda kakhulu, kodwa kwakhona, amaphepha amaninzi ewebhu ayila imifanekiso ngaphandle kwemvelaphi okanye eyaziwa ngokuba yiPNG, apho unokuyisebenzisa kwiiprojekthi zakho. Amaxesha amaninzi sikhuphela imifanekiso, sicinga ukuba ayinasiphelo kodwa xa sisiya ukufaka okanye ukuyibeka kwifayile, sifumana ukumangaliswa okubi.
Ukuba nawe udiniwe okanye udiniwe yile nto yenzekayo, kule post, sikunceda ufumane loo mifanekiso uyifunayo. Siza kucacisa kwesi sifundo sifutshane ukuba ungayifumana njani imifanekiso ngaphandle kwemvelaphi kuGoogle kwaye ukongeza, siza kucebisa uthotho lwezicelo ukuze wenze eyakho iPNG. Ngale ndlela, uya kuhlala ufumana into oyifunayo ngaphandle kweengxaki okanye ukothuka.
1 Yintoni umfanekiso wePNG
2 Isifundo sokukhangela imifanekiso kuGoogle ngaphandle kwemvelaphi
3 Izicelo zoMfanekiso wePNG
Yintoni umfanekiso wePNG
Ifayile yePNG (Portable Network Graphics), luhlobo olungaqhelekanga kakhulu lwefomathi kwimifanekiso. Yifomathi eguqula imifanekiso ngaloo nto ingafihliyo efunekayo ukuzifaka kuyo nayiphi na imvelaphi. Le fomati ibonakaliswe ngokungaqulathanga ilahleko, oku kuthetha ukuba umfanekiso awuphulukani nomgangatho kodwa uwujike ube yinto eyodwa.
Yifayile ehlala isetyenziswa kakhulu kwimifanekiso, amaphepha ewebhu, imidiya yentengiso efana neebhena, iipowusta, isazisi senkampani, njl. Ngamafutshane, ukuba into oyifunayo kukubeka uphawu kuyo nayiphi na indlela ngaphandle kokumisela imeko yangasemva kwiprojekthi yakho, yifomathi eqinisekileyo eya kukunceda ufezekise yonke into oyifunayo. Ukongeza, unokufumana le fomati kwiibhanki zemifanekiso ekhethekileyo.
Iimpawu zayo ziquka:
Bayakwazi ukusebenza nge-monochrome okanye imifanekiso emnyama namhlophe evumela ukuba yenziwe ngeenkangeleko zemibala eyahlukeneyo. Kwakhona, ukuba wenza iprojekthi apho usebenzisa kuphela abamnyama nabamhlophe kwaye ufuna imifanekiso yePNG enaloo mandla, ungayenza ngaphandle kwengxaki. Kukwakho ukuguqula ilogo kwifomathi yePNG zombini ezilungileyo nezingalunganga.
Ukuba yifomathi umsebenzi wayo ulele ekuhleni kwayo, zikwaphawulwa yinto yokuba ziyakwazi ukuxhasa amajelo acacileyo, esikhokelela kwingcaciso yokuba kutheni ezi fomati zivumela umfanekiso ukuba uboniswe ngendlela yendalo kuphela, akukho mvelaphi ingathathi hlangothi.
Inokuqonda okungcono kunefomathi ye-GIF, ekhokelela ekubeni sicinge ukuba ikwaxhasa imifanekiso esemgangathweni ophezulu kunye nenani eliphezulu leepikseli.
Ayinikeli nje kuphela ithuba lokubonakala ngendlela enye okanye imo, kodwa ikwabonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokungafihli, nto leyo isinika ukhetho phakathi koluhlu lwamathuba.
Es ifomathi eyiyo yoyilo lwekhathalogu apho iivektha ezisemgangathweni okanye imifanekiso ifuna ukuba mcaba. Ngamafutshane, i-PNG inokukugcina ngamaxesha amaninzi apho uyilo lufuna umfanekiso ngaphandle kwemvelaphi kunye nalapho iprojekthi yakho idinga ukushumeka umfanekiso opheleleyo.
Ukuba ubungazi, ulwandiso lwayo yi.png kwaye uya kuyifumana ngalo lonke ixesha ukhuphela umfanekiso.
Isifundo sokukhangela imifanekiso kuGoogle ngaphandle kwemvelaphi
Umthombo: xhasa uGoogle
Umthombo: usuku lwe-8 lwentengiso
ukuba Fumana imifanekiso ngaphandle kwemvelaphi kugoogle ngekhompyuter kufuneka ulandele amanyathelo ambalwa alula:
Into yokuqala esiza kuyenza kukuvula isikhangeli, inokuba yi-firefox okanye i-chrome, kodwa kuya kufuneka ukuba injini yakho yokukhangela ibe nguGoogle, ngakumbi. Xa sele siyivulile, kwibar yokukhangela, siya kubhala igama lomfanekiso esifuna ukuwukhangela, umzekelo "tulips".
Sakuba silibeke igama, kuya kufuneka sicinezele ukungena kwaye ngoko nangoko uGoogle uzakukhangela imifanekiso ehambelana noko sikubhalileyo. Xa uphendlo esilwenzileyo luvela, siya kukhetho imifanekiso y siya kuyifikelela ngokucofa nje.
Xa yonke imifanekiso yee-tulips ibonakala, kufuneka siye kwinketho izixhobo Nje ukuba sifikelele, uhlobo lwemenyu enokhetho olwahlukileyo luya kuvela kwangoko, phakathi kwazo zonke iinketho ezivelayo, siya kuvuma ukucofa ukhetho. umbala.
Emva kokuba sifikelele kukhetho lombala, siya kukhetho lombala. ukungafihli okanye ukungafihli ukunqakraza kolu khetho sikunika ukufikelela kuGoogle wenze uphando olubanzi lwemifanekiso yeetulips ezinemvelaphi ecacileyo ezifumaneka kwi-intanethi.
Ukuba sifuna ntoni kukwenza oko ngesixhobo sethu esiphathwayo kufuneka silandele la manyathelo alandelayo:
Into yokuqala esiza kuyenza kukukhuphela usetyenziso lukaGoogle, emva kokuba siyikhuphele kwaye siyifake, Siya kuvula i-injini yokukhangela kwaye sibhale igama elifanayo esilibhalileyo ngaphambili "Tulipanes" ekupheleni kwegama siya kongeza ukwandiswa kwePNG, siya kuba nomzekelo onje: Tulipanes PNG.
Ukusuka kolu phendlo, uGoogle uza kukubonisa umfanekiso ngamnye weetulips ezinokuba yiPNG. Ukuba into oyifunayo kukukhuphela umfanekiso wePNG ngaphandle kwemvelaphi, kufuneka ucofe umfanekiso. Qaphela kakhulu le nxalenye yenkqubo kuba ukuze ibe yiPNG ngokwenene kufuneka ibe nezikwere ezingwevu nezimhlophe.
Xa sele sinomfanekiso okhethiweyo kwaye ucofa, ukhetho lokukhuphela umfanekiso luya kuvela, siyavuma ukuyikhuphela kwaye uya kuba nayo ngokuzenzekelayo kwigalari okanye kwifolda yokukhuphela yesixhobo sakho.
Izicelo zoMfanekiso wePNG
I-Freepik yenye yeebhanki zemifanekiso ezidumileyo kwi-intanethi. Sisixhobo esilungileyo ukuba usebenza kuyilo lwegraphic okanye kwicandelo lokufota kwaye kufuneka ukhuphele iifayile kwifomathi yePSD (Ifayile yeNative Photoshop). Yintoni abambalwa abayaziyo kukuba kuyenzeka ukuba uyenze ngemifanekiso enolwandiso lwePNG.
Ukongeza, sisicelo esibonakaliswa ngokunikezela ngezibonelelo ezinomgangatho ophezulu womgangatho kwimifanekiso yayo. Lukhetho olugqibeleleyo ukuba into oyifunayo yimifanekiso yePNG okanye wenze iimockups kwiPhotoshop. Inyaniso ebalulekileyo ekufuneka uyiqaphele kukuba ikuvumela kuphela ukukhuphela imifanekiso emihlanu ehlawulweyo ukuba awubhalisanga kwaye ungene njengendwendwe, ngoko ineendleko zenyanga ngokuxhomekeke kuhlobo lomfanekiso oyikhethayo.
IFreepng yenye yezona njini zibalulekileyo nezidumileyo zokukhangela imifanekiso ekwifomathi yePNG kwi-intanethi. Ukongeza ekubeni yeyona ifunwa kakhulu, iqulethe uluhlu olubanzi lweetayipi kwimifanekiso yayo: ezemidlalo, uyilo, ubugcisa, ukupheka, ulwakhiwo, intengiso njl.njl.
Into entle malunga nale njini yokukhangela kukuba ayiqulathanga kuphela ukukhuphela imifanekiso kodwa kunye neempawu zeeprojekthi zakho. Ngamafutshane, ukuba le nto uyifunayo sisikhangeli esipheleleyo esineenketho ezahlukeneyo zokukhuphela, sisixhobo sakho esifanelekileyo. Ukongezelela, ezininzi iinketho zikhululekile ngokupheleleyo, okwenza kube nomtsalane ngakumbi.
IPixabay yimyuziyam yemifanekiso ekwi-intanethi kwaye kutheni ichazwa njengemyuziyam enkulu? inomfanekiso osimahla we-900.000, ewe, njengoko uyifunda, 900.000 imifanekiso yasimahla kunye neevektha onokuthi uzikhuphele ngokucofa nje kube kanye.
Ngeefayile ezingama-2000 ezinolwandiso kwi-PNG ukuze ukwazi ukuzikhuphela kwaye uzisebenzisele iinjongo zorhwebo, uyilo njl. Ngokuqulatha imifanekiso emininzi, unokufumana umbono omncinci weentlobo ezininzi onazo, kuba inamacandelo amaninzi apho yonke imifanekiso isasazwa khona.
Ngaphandle kwamathandabuzo sisicelo esifanelekileyo.
IStickPng yenye yeebhanki zePNG ezisetyenziswa kakhulu ngokugqwesileyo. Inemifanekiso engaphezulu kwe-1000 yokukhuphela kwaye nganye kuzo inomgangatho ofanelekileyo weeprojekthi zakho. Ukongeza, ikwanethuba lokuzikhuphela simahla kwaye inokhetho lokukhuphela izitikha eyilwe ngabo.
Sisixhobo esigqibeleleyo sokongeza ukonwaba kunye nolonwabo kwiiprojekthi zakho. Ukongeza, ikwaneendidi ezingaphezu kwama-2000, okuthetha ukulahleka phakathi kokhetho oluninzi olunokwenzeka kwaye unike umsebenzi wakho ukubanjwa kweyantlukwano ngokunjalo.
Ewe, awufundanga ngokungalunganga, iAdobe Photoshop inethuba lokwenza eyakho imifanekiso kwiPNG. Oku kunokwenzeka ngenxa yesixhobo sokucima ngasemva kunye nesiguquli esizenzekelayo kwi-PNG. Kuyinto ngaphandle kwamathandabuzo ukhetho inkwenkwezi kwaye leyo inokukugcina xa ufuna iPNG engxamisekileyo.
Ububi kuphela kukuba ifuna iindleko zenyanga okanye zonyaka, ngoko ukuyikhuphela akusimahla kodwa akufuni ndleko zigqithisileyo. Zama iPhotoshop kwaye uvumele ukuba umangaliswe sesi sixhobo kunye noluhlu lweenketho ezinikezelayo.
Ukukhuphela umfanekiso kunye nemvelaphi ecacileyo akusekho umsebenzi onzima, ngenxa yezinketho eziye zaphuhliswa kwiminyaka yamuva. Yiyo loo nto sinethemba lokuba ufunde ukukhangela imifanekiso kwi-PNG kwaye, ngaphezu kwako konke, sinethemba lokuba usetyenziso esilucetyisileyo lube luncedo kuwe.
Ifomathi yePNG ibisoloko iyenye yeefomati ezisetyenziswa kakhulu ngenxa yeempawu ezinikezelayo. Okokugqibela, sinethemba lokuba ufunde ngakumbi malunga nale fomati ikhethekileyo kwaye ukusukela ngoku ukukhangela olu hlobo lomfanekiso akuyi kuba yingxaki kuwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » UyiKhangela njani imifanekiso engasemva kuGoogle